Wasiirka Amniga Oo Faah Faahiyay Cida Kadambaysay Qaraxii Hotel Central +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Wasiirka Amniga Oo Faah Faahiyay Cida Kadambaysay Qaraxii Hotel Central +Cod
Waxaa weli taagan raadkii iyo dhibaatadii ka dhalatay qaraxyadii Jimcihii lagu qaaday Hotel Central ee magaalada Muqdisho, kuna dhinteen Mas’ uuliyiin ka tirsan Dowladda. waxaa soo baxaya warar iyo faah faahino kala duwan oo ku saabsan Haweeneydii fulisay qaraxaasi oo lagu magacaabo Luul Ahmed Dahir iyo nin Ismael Muse Guled oo la aaminsan yahay inuu ahaa Odaygeeda.
Laamaha amniga iyo sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay in Haweeneydaasi ay muddo 4 bilood ah ka shaqeyneysay Hotelka, gaar ahaan qeybta Receptionka, waxaana la rumeysan yahay inay aheyd maskaxdii ka danbeysay qaraxaasi.
Warku wuxuu intaa ku darayaa in Haweeneydaani oo haysatay dhalasho Hollandees ah in ay waxyaabaha qarxay ay gaariga ku rakibtay iyo ninka dhintay ee gaariga saarnaa in uu isna ahaa qofkii keenay qalabkaasi.
Ficilkaasi lagu dhamaaday ayaa waxay muujineysaa in Alshabaab ay sirdoon ahaan uga horeyso dowladda Federaalka iyo hay’adaheeda ammaanka, dhinacyada diyaarinta iyo abaabulka iyo fulintaba, waxaana soo noqnoqday qaraxyada noocan oo kale ah iyadoo kuwii hore wax waaya-aragnimo ah lagu qaadan ama ka hortag ka muuqan hay’adaha dowladda.
Wasiirka ammniga gudaha C/risaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in qaraxa Hotelka Central inuu ku dhacay habac ka yimid dhinaca hotelka, wuxuuna sheegay in gabar ka mid ahayd maamulka receptionka inay is qarxisay, kana timid Yurub, wuxuuse ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo.
Haweeneyda is qarxisay ayuu sheegay inay lahayd hooyo lix caruur ah leh oo min laba, laba mataano u dhashay, haweeneyda ayuu sheegay inaysan hotelka weligeed seexan marka laga reebo habeenkii ka horeeyay maalinta ay qaraxa geysatay.
Haweeneydaasi ninkeeda ayuu sheegay inuu isna dhintay balse aanay caddeyn sababta geeridiisa. loona haysto haweeneydaasi in qaraxaasi ay tahay qofka kaliya ee loo hayo inay ka danbeysay, caruurteediina waxaa la sheegay inay u geystay hooyadeed maalin ka hor.
aamaha amaanka ayaa xabsiga dhigay shaqaale ka tirsan maamulka hotelka, kuwaasi oo baaritaano ku wada, lana filayo in marka baaritaanada dhamaadaan lasoo bandhigo warbixino buuxa oo dhab ah.